भ्लादिमिर पुटिनको विगत : एक पटक जासूस, अहिले राष्ट्रपती :: NepalPlus
आन्द्रेई तापालगा२०७८ माघ १५ गते २०:३७
सन् १९८५ मा स्टासी द्वारा युवा भ्लादिमिर भि पुटिनलाई जारी गरिएको फोटो आईडी कार्ड (स्रोत: BSTU.de via history of yesterday.com)
विश्वभरका प्रमुख देशका सबै राष्ट्रपतिहरूको धेरै दिक्कलाग्दो विगत छ । तिनीहरू कि त शक्तिशाली परिवार वा सर्कलमा जन्मिएका छन् जसले उनीहरूलाई राष्ट्रपतिको ओहदामा पुर्‍याएको छ वा अन्ततः राष्ट्रपतिको रूपमा समाप्त हुने बाटोमा । यद्यपि भ्लादिमिर पुटिनको पुरानो सोभियत संघले प्रभाव पारेको पृष्ठभूमि बिल्कुलै फरक छ ।
विश्वले पुटिनलाई २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा आलोचित राष्ट्रपति र सबैभन्दा लामो राष्ट्रपतिको क्यारियरको रूपमा पनि हेर्छ । पश्चिमी सञ्चार माध्यमले पुटिनको राजनीतिक रोजाइको आधारमा आफ्नो धारणा परिवर्तन गरिरहन्छन् जबकि सामान्य रुसी जनता पुटिनले देशलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि राम्रो काम गरेकोमा सहमत छन् ।
पुटिन: अग्र पक्तिका एक सिपाही
उनले गरेका धेरैजसो पछिल्ला निर्णयहरू उनको विगतबाट प्रभावित हुन सक्छन् । तर उनको विगत के हो ? धेरै वर्षदेखि मानिसहरूले पुटिनलाई केजिबी (राज्य सुरक्षाको निकाय) जासूस हुनु भनेको समर्थकहरूलाई फ्याँक्ने षड्यन्त्र सिद्धान्त हो भन्ने सोच्दै आएका छन् । तर वास्तवमा यो शतप्रतिशत सत्य हो । र उनले यो तथ्यलाई धेरै पटक सार्वजनिक रूपमा स्वीकार पनि गरेका छन् ।
मिनिस्ट्रियम फुर स्टासिचेर्हेईट (जर्मन राज्य सुरक्षाको लागि मन्त्रालय) वा स्टासी (सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक भण्डार, अभिलेख गर्ने) अभिलेखहरूमा फेला परेको प्रमाणको एउटा कागजी टुक्राले प्रमाणित गर्‍यो कि उनी वास्तवमा पूर्व सोभियत संघको गोप्य सेवाको जासूस थिए ।
कडा प्रमाण पुरानो पूर्वी जर्मन गोप्य प्रहरीको आईडीको रूपमा आउँछ जुन २०१८ मा पत्ता लगाइएको थियो । जाडोको अन्त्यमा, पुटिनलाई केजीबीको गोप्य एजेन्टको रूपमा पूर्वी जर्मनी पठाइएको थियो । यो अज्ञात छ कि उनी वास्तवमा स्टासी द्वारा मान्य थिए वा उनले वास्तवमा मस्को र अन्य उच्च निकायहरू द्वारा दिएका नियमहरू पछ्याउने आश्वासन दिन स्टेटीमा घुसपैठ गरिरहेका थिए । उनले आफ्नो धेरैजसो समय ड्रेसडेनमा बिताए जहाँ उनले पूर्वी जर्मनी भित्रको साम्यवादलाई पश्चिम जर्मनी भित्रका पूँजीवादीहरूले फ्याँकिने वा प्रभाव पार्ने छैनन् भनी आश्वासन दिनुपर्‍यो ।
सन् १९८५ मा स्टासीद्वारा जवान भ्लादिमिर भि पुटिनलाई जारी गरिएको फोटो सहितको पूर्ण आईडी कार्ड (स्रोत: BSTU.de via history of yesterday.com)
सानैदेखि पुटिन जासुसी र गोप्य एजेन्टको रूपमा धेरै मोहित थिए जसले शत्रु रेखाहरू पछाडि मात्र काम गर्थ्यो । जीवनीका लेखक स्टिभन ली मायर्सका अनुसार पुटिन “द शिल्ड एण्ड द स्वर्ड” नामक सोभियत उपन्याससँग प्रेममा थिए । उपन्यास एक सोभियत गोप्य एजेन्टको बारेमा हो जसले नाजी शासनलाई विफल पार्न र दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य गर्न मद्दत गर्‍यो ।
एक राजनीतिज्ञको रूपमा उनको आकांक्षालाई मान्यता दिन आवश्यक छ । किनकि उनी कानून अध्ययन गर्न सेन्ट पिटर्सबर्ग स्टेट युनिभर्सिटीमा गएका थिए । एउटा चाखलाग्दो पक्ष यो हो कि उनको थेसिस अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यापारमा केन्द्रित थियो ।
सन् १९७५ मा उनको स्नातक पछि उनी केजिबीमा भर्ती भए । उनीसँग सैन्य अनुभव थिएन । न त कुनै किसिमको अनुभव थियो जसले उनलाई राम्रो केजिबी एजेन्टको रूपमा मान्न सक्छ । उनलाई केजिबी अध्यक्ष युरी एन्ड्रोपोभले सिर्जना गरेको नयाँ कार्यक्रमको आधारमा भर्ती गरिएको थियो जसले युवाहरूलाई भर्ती गर्न र उनीहरूलाई सानै उमेरदेखि प्रशिक्षण दिन थप महत्वपूर्ण केजिबी अधिकारी बन्न चाहन्थे ।
केजीबीले उनलाई दिएको काउन्टर-इन्टेलिजेन्स कार्यहरूको बारेमा वास्तवमा धेरै थाहा छैन । केजिबीमा काम गरेका धेरैजसो मानिसहरू यस प्रकारको विगतको बारेमा कुरा गर्दैनन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि यसले आफ्नो जीवनलाई खतरामा पार्न सक्छ । कसैको लागि यो एक मिथक हुनसक्छ । तर त्यहाँ मानिसहरूको एक समूह छ जहाँ सम्भवतः एक गोप्य आधिकारिक संगठन बनेको छ । त्यसले आफ्नो विगत स्वीकार गर्न चाहने पूर्व केजिबी अधिकारीहरूलाई मारिरहेको छ ।
भ्लादिमीर पुटिनको जीवनी अनुसार मस्को पुरानो सोभियत दिनहरूको बारेमा मौन रहन रुचाउँछ । त्यस अवधिमा पूर्वी जर्मनीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूबाट जानकारिहरु छन् र उनको अनुहार देखेको सम्झना छ । विशेष गरी ५ डिसेम्बर १९८९ मा जब स्टासीमा विद्रोहको योजना बनाइएको थियो । पुटिनले केजीबीले सिकाएको आफ्नो महान एजेन्ट सीपहरूबाट बाहिर निस्केर विद्रोहलाई अस्वीकार गर्न भीडलाई मनाएका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ । उनले भीडलाई यदि उनीहरूले भवनमा आक्रमण गरे भने उनीहरूमाथि अधिकारीहरूले गोली हान्ने बताए । तर वास्तवमा मानिसहरू सशस्त्र थिएनन् ।
यद्यपि सङ्कलन गरिएका ऐतिहासिक अभिलेखहरूबाट यो भनिएको छ कि उनले आफ्नो सबै समय पूर्वी जर्मनी (१९८५-१९९०) मा बिताए । गत वर्ष एक पूर्व व्हाइट हाउस फोटोग्राफरले १९८८ मा रोनाल्ड रेगनमाथि युवा पुटिनले जासुसी गरेको तस्वीर साझा गरेका थिए ।
कसै-कसैले भ्लादिमिर पुटिन जस्तो देखिने भनिरहेका छन् । यद्यपि उनी सोभियत भन्दा पनि पश्चिमा जस्तो देखिने भेषमा थिए । शीतयुद्ध युगको अन्त्यमा संसारको एक प्रमुख भागबाट अर्कोमा संक्रमण गर्नु सबैभन्दा सजिलो थिएन । तर केजीबी जासूसका लागि यो ठूलो चुनौती थिएन र ?
के उनको विगतले राष्ट्रपतिमा प्रभाव पारेको छ ?
यी घटनाहरू बाहेक केजिबी भित्रको उनको पुरानो जीवनको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारीमा छैनन् । यतिसम्म थाहा छ कि केजीबी तिनीहरूको काउन्टर-इन्टेलिजेन्स अपरेशनहरूमा नैतिकताबाट टाढा थियो । तर के उसको पूर्व प्रशिक्षण र नैतिकतालाई आफ्नो राजनीतिक करियरमा अगाडि ल्याइयो ? हामीले देख्न सक्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय कानून भित्र उनको वर्षौंको अध्ययनले वर्षौं सम्म अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न मद्दत गरेको देखाइएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको करियरको अन्त्यमा पनि अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्ध विगतको तुलनामा निकै राम्रो थियो ।
मिडिया भित्रका केही सामान्य विचारहरू भन्छन्, अरू कोही रुसको राष्ट्रपति बन्ने हो भने यसको अर्थ जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने व्यक्तिलाई धेरै शक्ति दिनु हो । यसले या त देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्छ वा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको युद्ध मात्रै ल्याउनेछ जुन पुटिनले बेवास्ता गर्न राम्रो गरिरहेका छन् । युक्रेन विवादलाई ध्यानमा राख्दैपनि त्यसो भनिरहेका हुन् ।
यो सत्य हो कि आज सत्तामा रहेका प्रमुख रुसी अधिकारीहरू पनि पहिले केजीबी अफिसरहरू थिए । स्टासी अभिलेखका अनुसार रक्षा निर्माता रोस्टेकका प्रमुख सर्गेई चेमेजोभ र ट्रान्सनेफ्ट प्रमुख निकोले टोकरेभले केजीबी भित्र पुटिनसँगै ड्रेसडेनमा सेवा गरेका थिए । कम्युनिज्मको पतनपछि उनीहरूलाई अनुकूल बनाउनुपर्‍यो र अनुभवका कारण राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च पदमा बस्नुपर्‍यो ।
हामी सबैको बिगत हुन्छ र धेरैजसो अवस्थामा त्यो भूतकाल भविष्य जत्तिकै उज्यालो हुँदैन । यो किनभने अनुभवबाट मात्र हामीले जीवनको पाठ सिक्न सक्छौँ ।
(हिस्ट्री अफ येस्टरडे डट कमबाट भावानुवाद-संपादक)
राजकुमार वीरेन्द्रले कुखुरा भुत्ल्याएको त्यो दिन